Abacwaningi wabangela computer abantu ukuba azame ngasese ukuze uvakashela amawebhusayithi kwakucatshangwa kuvalwe ohulumeni ingcindezelo.
Ngo-March 2014, abacwaningi umkhankaso Encore, uhlelo ukuhlinzeka real-time and izilinganiso global of ukucwaninga izici Internet. Ukuze siqonde isebenza kanjani, ake sicabange ngalo esimeningcondvo lewebhu yakho siqu (uma ungenawo eyodwa, ungacabanga umngane wakho). Enye indlela ukucabanga mayelana lewebhu lakho njengelungu uhlelo lwekhompyutha elulwimini HTML. Lapho umsebenzisi evakashela website yakho, ikhompyutha yakhe elanda Uhlelo lwakho html bese isihumusha ngokuthi esikrinini wakhe. Ngakho, lewebhu yakho wuhlelo uyakwazi ntombazane computer abanye abantu balandele amasethi ezithile imiyalelo. Ngakho-ke, abacwaningi, uSam Burnett Nick Feamster, ababesedwaleni Georgia Tech, wakhuthaza abanikazi bamawebhusayithi ukufaka ikhodi SNIPPIT encane kumakhasi ewebhu zabo:
Uma uvakashela ikhasi lewebhu le SNIPPIT khodi kuwo, nakhu kuzokwenzekani. Ngenkathi isiphequluli sakho sewebhu kwaba rending lewebhu, lo SNIPPIT ikhodi kuzobangela computer yakho ukuzama ukuxhumana website ukuthi abacwaningi asiqaphile. Ngokwesibonelo, kungase kube website a bavinjelwe iqembu lezombusazwe noma iqembu benkolo bashushisa. Bese, computer yakho iyoba ukuyobikela abacwaningi mayelana kungakhathaliseki ukuthi wakwazi ukuxhumana website okunamandla ivinjiwe (Figure 6.2). Ngaphezu kwalokho, konke lokhu kwakuyoba okungabonakali kuwe ngaphandle kokuba zazibheka html ifayela eliwumthombo lakho lewebhu. Okunjalo izicelo zekhasi ongabonakali third-party empeleni wandile kuwebhu (Narayanan and Zevenbergen 2015) , kodwa zihilela kuyaqabukela imizamo ezikhuluma ingcaca ngobulili ukuze akale imingcele.
Figure 6.2: wokuhlelwa kwendikimba design locwaningo Encore. Le website umsuka uyakhonza lewebhu abhalwe HTML nge ikhodi amazwibela amancane setintfo letitfolakala kuyo (isinyathelo 1). Ikhompyutha yakho ihumusha lewebhu, okuyinto kubangela umsebenzi nesilinganiso (isinyathelo 2). Ikhompyutha yakho imizamo yokufinyelela target yokukala, okungaba website a bavinjelwe iqembu lezombusazwe (isinyathelo 3). A ngomshini kumhloli wezincwadi ka-, ezifana uhulumeni, kweminikelo kungenzeki ngaleso sikhathi uvimbele ukufinyelela kwakho e-target nesilinganiso (isinyathelo 4). Ekugcineni, ikhompyutha yakho ibika ngemiphumela lesi sicelo ku-abacwaningi (hhayi kuboniswe figure). Figure kusukela Burnett and Feamster (2015) .
Le ndlela has ezinye izindawo ekhangayo technical sokulinganisa imingcele. Uma amawebhusayithi ngokwanele ungeze lokhu SNIPPIT ikhodi, khona-ke abacwaningi ungaba real-time, global-isikali ngezinga elithile lapho amawebhusayithi zazihlolwa esisetshenziswa amazwe. Ngaphambi kokuqala project, abacwaningi Wacebisana the IRB at Georgia Tech, futhi IRB, walile ubuyekeze project ngoba kwakungeyona "izikhonzi womuntu ucwaningo" elibuswa Common (uMthetho Common isethi elawula kunazo Federally-uxhaso ucwaningo e-US, ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa, bheka iSithasiselo Historical ekupheleni kwalesi sahluko).
Nokho, ngokushesha ngemva kokushona Encore wethulwa, abacwaningi abangu baxhumane Ben Zevenbergen, khona-ke umfundi, owavusa imibuzo mayelana izimiso project. Ikakhulu, kwakukhona ukukhathazeka ukuthi abantu emazweni athile wadalula engozini uma computer yabo wazama ukuvakashela amawebhusayithi ezithile ebucayi, futhi laba bantu ababekwa ekuvezweni ingozi akavumanga iqhaza ocwaningweni. Ngokusekelwe kulezi zingxoxo, ithimba Encore Ushintshe iphrojekthi ukuzama kuphela ukukala ukucwaninga Facebook, Twitter, kanye YouTube ngoba third-party ezama ukuthola le sites zivamile ngesikhatsi ukuphequlula web evamile (isib, zonke lewebhu neNkinobho Facebook Like kubangela isicelo third-party Facebook).
Ngemva ukuqoqa idatha usebenzisa lokhu design modified, iphepha echaza indlela kanye nemiphumela sathunyelwa SIGCOMM, a ehlonishwayo inkomfa computer science. Ikomidi Uhlelo babekwazisa okomnikelo lobuchwepheshe ephepheni, kodwa uzwakalise ukukhathazeka ngokuntuleka emvume unolwazi kusuka abahlanganyeli. Ekugcineni, ikomidi uhlelo wanquma ukushicilela iphepha, kodwa ngala mazwi ukusayina okusikhathazayo zesimilo (Burnett and Feamster 2015) . Amazwi afana nalawa ukusayina zazingakaze esetshenziswa ngaphambi at SIGCOMM, futhi leli cala kuye kwaholela mpikiswano ezengeziwe ososayensi computer ngesimo kwesimilo e ucwaningo lwabo (Narayanan and Zevenbergen 2015) .